Midnight Sun ရုပ်ရှင်ရဲ့ soundtrack videoမှာပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ Bella Thorne – Trend.com.mm
Posted on February 15, 2018 by Wint
Bella Thorne နဲ့ Patrick Schwarzenegger တို့ရဲ့ချစ်စရာ သီချင်းဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး ….
အသစ်ထွက်ရှိတော့မယ့် Midnight Sun ရုပ်ရှင်မှာ Bella Thorne ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သီဆိုထားတဲ့သီချင်းလေး Burn So Bright ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ သီချင်းဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး သူတို့ဇာတ်ကားလေးကိုမျှော်ရတာ မောနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ထင်ထားတာထက် အများကြီးကောင်းနေမယ်ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းနမူနာကြည့်တည်းကသိနိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးအတွက် အောင်မြင်မှုအများကြီးရနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
@bellathorne this song is my daily anthem. I love everything about this song! Your voice is beautiful, the lyrics are beautiful, the music is beautiful and the message in the song is beautiful #burnsobright pic.twitter.com/G96icf4bTL
— Christina (@readysetrock75) February 10, 2018
Burn So Bright သီချင်းထဲမှာ Bella က သူမရဲ့အသံပါဝါကို ပြထားပါတယ်။ Midnight Sun ရုပ်ရှင်မှာတော့ Bella က အသက် (၁၇)နှစ် Katie Price အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ရှားပါးရောဂါတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်။ သူမရောဂါက နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့လို့မရတာပါ။ ဒါကြောင့် သူမက နေ့ဆိုအပြင်မထွက်နိုင်ဘူး။ ညဘက်တွေပဲ အိမ်အပြင်ဘက်ထွက်ပြီး လျှောက်သွားနိုင်တယ်။ ညဘက်တွေလျှောက်သွားရင်း သူမရဲ့ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ချစ်ကြိုးတွယ်သွားပုံကိုရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်ရိုက်ပြသွားတာ တကယ်ကိုကြည်နူးစရာလေးပါပဲ။ အချစ်ကားကြိုက်သူတွေတော့ Feel ရဦးမှာပေါ့လေ။ ၂ဝ၁၈ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့ဆိုထွက်ပါပြီ။